Dawladda Kenya oo wali tabataagan mellayshiyaad dilay askar dawladda ka tirsan. – Radio Daljir
Nofeembar 14, 2012 10:43 b 0
Nairobi, Nov 14 ? Dawladda Kenya ayaa wali doon-doonaysa, kuna dabataagan mellayshiyaad qabaa?il oo bilawgii todobaadkaan toogasho ku laayey in ku dhaw 50 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee Qaranka Kenya.
Weerarka lagu laayey ciidamada dawladda Kenya, ayaa ka dhacay dhul-miyi ah oo ka tirsan gobolka Sambuuru, kaasoo ay ku dhaqan yihiin qabaa?ilaad xoolo dhaqato? u badan oo ay ka dhaxayso xurgo colaadeed oo dhiig badan ku daatay, muddooyin kala duwanna soo laalaabtay.
Wasiirka ammaanka Qaran ee dawladda Kenya Katoo Ole Metito ayaa warbaahinta u sheegay dawladda Kenya in ay ka go?an tahay, ?gacan ku soo dhigidda mellayshiyaadkii hubaysnaa ee gaystay weerarka ciidamada lagu laayey, waxaana uu xusay wakhti aan fogayn in ay caddaalladda ka soo hor muuqan doonaan, ciidamaduna ay ku raad-joogaan.
Hadalka wasiirka amniga ee dawladda Kenya, ayaa imaanaya iyadoo meydad horleh oo ciidamada Kenya ah laga soo helayo deegaannadii ay rabashadu ka dhaceen ee gobolka Sambuuru.
Darraad ayey ahayd markii garoonka diyaaradaha ee Wilson Airport la soo gaarsiiyey meydadka 31 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda, waxaana mar kale shalay galab isla garoonkaasi laga soo dejiyey meydadka 13 askari, kuwaasi oo tirada dhimashada ka dhigaya 44 askari.
Weerarka ciidamadaani ay ku naf-waayeen, ayaa ahaa mid gaadmo ah oo ay fuliyeen mellayshiyaad ku abtirsada qabaa?ilka Sambuuru ee dalka Kenya, waxaana lagu laayey jid-gooyo loo dhigtay dhul hawd ah, xilli ay ku raad-joogeen xoolo qabiilkaasi uu dhacay.